Wararka Maanta: Sabti, Nov 3 , 2018-Puntland oo u digtay musharixiinta madaxweyne
Wasiirka warfaafinta Maamulka Puntland Cabdi Cali (Qarjab) oo warbaahinta la hadlay ayaa ayaa musharixiinta maaxweynenimo ee Puntland ugu digay in ay hub culus lasoo galaan maamulkaasi.
“Puntland waxay dagaal kula jirtaa Alshabaab iyo Daacish ciidi gacan ka geysan karta waa lasoo dhaweynayaa laakiin marnaba ma aqbali doono in maagalaa dhexdeeda gaadiid dagaal iyo hub culus lagu dhex wado oo magaalada saxmad laga dhigo, musharixii doonaya in uu soo wato ilaaladiisa waa loo ogolyahay laakiin hub culus ma aqbali doono” ayuu sheegay Wasiirka warfaafinta Puntland.
Maamul gobolleedyada dalka ayaa hadda u muuqda kuwo mashquul ku ah doorashooyinka ku soo foolka leh oo ku soo aaday waqti xasaasi ah oo khilaaf adag uu kala dhaxeeyo dowladda dhexe ee federaalka, waxaana jirta baqdin weyn oo ay ka qabaan madaxda maamul gobolleedyada ee xiligan fara-galin uga timaada dhinaca dowlada.
Wasiir Qarjab ayaa sidoo kale sheegay in Puntland ay masuul ka tahay amaanka musharixiinta u loolamaya xilka maaxweynaha maamulakasi.
Doorashada ugu soo horeysa ayaa ka dhaci doonta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay oo ay musharixiin dhowr ah ku tartami doonaan kursiga madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed.